Nhau Blog yeIndi Tagged "Kufamba uye Nzvimbo" - THE INDIAN FACE
nyika The Indian Face
Mutambo uye Bhowa
Kufamba uye Nzvimbo
Kuziva uye Kuziva
KUCHENJERWA KWEMAVHANGI ANOSANGANISWA
En The Indian Face isu tiri vateveri vakuru veiyi yezhizha yekufamba maitiro: Camper vans! Isu tinokuudza zvese: apo kufamba kwakamuka, ndedzipi mhando dzemisasa iripo, nzvimbo dzakakurudzirwa zvakanyanya kuSpain kufamba nadzo uye inova imwe yemakambani anotungamira kuvaroja.
Kukwira muzvitsuwa zveSpain
Zvitsuwa Canary s Balearic Ivo vanokwanisa kupa akasiyana akasiyana zviitiko zvekuita senge akasiyana mafambiro uye nzira dzekukwira dzinogumira mu beach, asiwo mumakomo. Kana iwe uri fan of trekking ramba uchiverenga nekuti pano tinokuudza imwe yenzira dzakanakisa dzekufamba netsoka muzvitsuwa zvese zviri zviviri.
Iwo matatu akanyanya kunaka mahombekombe munyika kune matatu magirazi ezuva
Nyanzvi dzinokurudzira kunyudza tsoka dzako mujecha kanokwana kamwe pagore, uye kurega maziso ako achirasika pakati pemumvuri wakasiyana uyo bhuruu yegungwa inotipa. Ndosaka takuunzira 3 beaches, inoonekwa seakanaka kwazvo pasirese uye padhuze navo, kurudziro yedu yevhiki, magirazi edu: kwekumaodzanyemba, Freeride y Polar Nhema. Kuitira kuti usarasikirwe nekuona chero tsananguro yeparadhiso idzi.
Kukwikwidza Kwakanyanya: Nzira dzine njodzi
Ungade here kuenda kuburikidza ne'Dragoni Mountains '? Kana pamwe pamwe rwendo kuenda kumakomo uko Jurassic Park yakatorwa? Unogona kufunga kuti tiri kutaura nezvenzvimbo dzekunyepedzera, asi chokwadi ndechekuti seizvi, pane rondedzero yenzira dze kufamba kwakanyanya. Cataloged saizvozvo nezinga re kuoma uye kunyangwe ... zvichikonzera rufu kune avo vakashinga kuvayambuka. Uye iwe, ungashinga here?
Puerto Escondido, Oaxaca: Paradhiso yeferfer muMexico.
Kamwe zvakare tinopinda imwe yenzvimbo dzeparadhiso dziripo. Sevadi vemasaisai nerusununguko, takashanyira nzvimbo inozivikanwa-shoma inoenderana nezita rayo: Puerto Escondido, kuMexico. Joinha isu mune ino yekushanya, patinokuudza iwe nei ichifungidzirwa paradhiso yevanoda ve egungwa.
Takaenda kuIndonesia kunonyudza uyezve takagara iyoga
Dai 20, 2021
Takaenda kuIndonesia! Joinha isu mune yanhasi posvo patinokuudza iwe ese edu ruzivo rwekuziva zviroto nzvimbo munyika ino. Asi kunyange zvirinani! Isu tinokudzidzisa iwe kufema, iye akave protagonist yerwendo rwedu. Ziva kuti kudhizaivha uye iyo yoga zvine hukama hwakadzama hunochinja mafungiro ako emitambo miviri iyi!
Patakaenda kudhibha kuMaldives
Dai 04, 2021
Dhonzai mukati memvura yakadzika yemvura yeMaldives! Tinokuratidza ino inzvimbo yakanaka kuti iwe uzadzwe nechishuwo chekuchiona. Kunzvimbo izere nemavara, zvinwiwa uye zvakasarudzika zviitiko. Kushanya kwemaatoll akasiyana kuti udzidzise kudhiraivha, kwaunodya zvakanaka uye nenzvimbo dzekugara panguva yako yekushanya.
Nhungamiro huru kune skatepark muSpain Tsvaga yakanakisa skate mapaki!
Skateboarding iri kuwedzera kurangwa muSpain, uye kukura kwezvivakwa zvepaki kune anowedzera akaomesa skaters arikungokura chete. Isu tinokuudza pazasi kuti ndeapi akanakisa Skatepark muSpain. Usavasuwa!
Chiitiko chekufamba wega Batanidza neako zvemukati!
Kufamba wega kunokutendera kuti ubvise kubva pasirese kuti ubatanidzane newe. Kana iwe urikufunga kutora mweya wako webhegi uye kutsvakisisa mune ino yega adventure, tarisa kune ezvemitambo zvirongwa uye zviitiko zvaunogona kuita uye iwo matipi aunofanirwa kuziva kana uchifamba zvakachengeteka COVID-19.
Svika pakuziva 7 mikuru nzira dzemabhasikoro ekuenda kuchovha!
Kutenderera kwekushanya kwave chimwe cheanotonhora zviitiko zhizha rino! Chiitiko chinonyatsobatanidza chakanakisa chevaraidzo kuchovha neakanyanya kushanya Iwe uri mudiwa mukuru wekushanya uye kuchovha bhasikoro? Wobva watora magirazi emabhasikoro ako matsva uye wotasva pamwe nesu imwe yenzira dzakanakisa dzemabhasikoro muSpain, izere nemataundi ekufananidzira, uye zvisingakundike makomo uye maonero egungwa!
12 curiosities nezve dunhu polar kubva kuAntarctica
Iyo inoratidzika nzvimbo uye yakaoma mamiriro ekunze akaita Antarctica imwe yenharaunda polarInonyanya kugadzikana paPasi, asiwo mune imwe yenzvimbo dzinonakidza uye dzakadzidzwa. Neichi chikonzero, kubva The Indian Face isu tinoda kukuudza iwe zvinonakidza chokwadi!
Uku kutsvedza muColorado! Kuenzaniswa kwenzvimbo dzako dzakanakisa
Isu tatova vanakidzwa neiyo ski mwaka! Uye, kana isu tichifunga nezveColorado, ndizvo chaizvo iyo Ski chinhu chekutanga chinopinda mupfungwa medu… Hazviiti kusabatana neumwe neumwe! Bvisa iyo Magirazi eSki uye dzidza zvakawanda nezvezviteshi zvaro zvakazara nemakomo aine anoshamisa mafafitera uye zvakasikwa mbiya.
Windsurf uye Kitesurf mukati Tarifa Zvibvumire kuti utakurwe nemusoro wemhepo!
Imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekudzidzira windsurf and the kitesurfing hazvina mubvunzo Tarifa, mudunhu reCádiz Hazvisi zvemahara ivo vanomuziva saiye guta remhepo! Wakagadzirira kurega iwe uchitakurwa neakanakisa eAndalusia? Kana iwe uri mudiwa wegungwa, mhepo uye ushingi, wobva waverenga uye uwane ruzivo rwekushanya Tarifa, inzvimbo yakanaka yekudzidzira kite uye mhepo yemhepo!
Tsvaga Hoi An, iro rakanakisa guta muVietnam!
Kana usati washanyira Hoi An ino ndiyo nguva yako kuzviita! Uneguta rekufananidzira regungwa reVietnam uye rinozivikanwa nekuda kwerunako, nhoroondo, tsika nemagariro. Inowanikwa pakati nepakati Ho Ho Minh uye guta guru Hanoi, Hoi An hapana mubvunzo kuti nderimwe remaguta anoshanyirwa uye akanaka kwazvo munyika. Verenga pamusoro uye uwane nesu nei ichionekwa seimwe yehupfumi hwakanyanya hweVietnam!
Hudson Yards Iyo nyowani uye yakasarudzika nharaunda muNew York!
Kana isiri yako yekutanga nguva kushanya New York ungangoda kudzokera shure wotarisa futi. Iri guta rakakura musha kune imwe yeanonyanya kuvakwa makore apfuura: Hudson Yards. Verenga pamusoro uye uwane zvimwe nezve izvo nharaunda nyowani uye yakasarudzika yeNYC inotaridzika!
Chiitiko chekukwira Villarrica Volcano
Attention, kushanya kwekushanya vanoda! Isu tinoziva kuti iwe unoda kuziva nzvimbo nyowani uye kurarama zvisingakanganwiki zviitiko zvinotora hupenyu hwako zvakanyanya. Ino nguva tiri kuenda kune imwe yenzvimbo dzinoshanyirwa nevashanyi nevashanyi vanobva pasirese. Villarrica Volcano! Tsvaga ruzivo rwekukwira gomo rakakurumbira rinoita mhepo inoputika muChile.
Uku ndiko kusvetuka muSydney-Wollongong (Australia)
Chimwe chezvakanakisa nzvimbo parachute pasina mubvunzo Australia. Iwe uri anoda zvakanyanya mitambo nemitambo? Ziva chiitiko che enda skydiving muSydney - Wollongong!
Chiitiko chekudenga paTurquoise Coast
Kana iwe uchida kuferefetwa, paradisiacal bhishi uye nzvimbo dzakakwana dzezororo, ruzivo urwu nderwe. Tsvaga zvishamiso zveTurquoise Coast paTurkey Riviera!
Kubhururuka mubharuni pamusoro pechitsuwa cheMallorca
Kubhururuka pamusoro peMallorca mumhepo inopisa mhanza kwatova tsika paSpanish Balearic Island. Chiitiko chose chinotora zviuru zvevashanyi kutora kuravira kwedenga kubhururuka nepasire pamusoro penyika pane ukuru hwekufamba.
Langkawi Archipelago muMalawi
Achibva pakati pechinhambwe chegungwa reAndaman tinowana imwe yemifananidzo inoshamisa kwazvo pasi rese mukubwinya kwayo kwese emerald: Langkawi, nzvimbo inoshamisa yezvitsuwa yakaumbwa nezvitsuwa zana nemakumi manomwe.
Surf muNazaré, guta guru remafungu makuru pasi.
Itaundi remahombekombe iro rinonzi rakadzikama uye rakadzikama asi asi muchimiro charo inogara gungwa remusango zvinoita kunge rakarongedzerwa zvakanyanya kufambisa.
Ongorora Helsinki: Tsvaga, tsika uye zororo muFinland!
Iri guta remuchadenga rakagadziriswa pamahombekombe eBaltic rinotsanangurwa serakadzikama uye rizere neruzivo neruzivo. Iyo yepakati uye makona ese eHelsinki inosimudzira nhoroondo, hupfumi hwekuvaka uye dhizaini, izvo zvinosiya vashanyi vese vafadzwa
Elqui Valley: Rwendo rwekuChile rwausingakwanise kupotsa!
Inowanikwa mudunhu reCoquimbo, kumadokero kweLa Serena, isu tinowana Elqui Valley, imwe yenzvimbo dzakanaka uye dzakanaka dzezvisikwa munyika yese, uyezve kuSouth America.
Iyo vanokwira rusununguko - kubva ruzivo uye mukurumbira - anoziva izvi chaizvo ... kukwira muYosemite kunoshamisa! Izvi nzvimbo Iyo inoonekwa semececca kune vakanaka kwazvo vanokwira matombo munyika, uye chinhu chinoshamisa chinonetsa kune vazhinji kusarudza kuisa madziro epalifornian yenyika paki yavo mune repertoire.
1 2 3 Zvadaro
© 2021 THE INDIAN FACE. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.